ဆန်နီနေမင်း: ဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့ အဓိကမိန်းက ဘာလဲ မြန်မာအင်္ဂလိပ်
ဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့ အဓိကမိန်းက ဘာလဲ မြန်မာအင်္ဂလိပ...
ဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့ အဓိကမိန်းက ဘာလဲ မြန်မာအင်္ဂလိပ်
၁။ သူများပြောသံကြားတာနဲ့ အမှန်လို့ မယုံကြနဲ့။ (သူများတွေပြောတာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်က တန်ခိုးရှိတယ်၊ ရောဂါပျောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်၊ သူက ပိုက်ဆံတွေရအောင်၊ အလုပ်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အသံကြားရုံနဲ့ မယုံသေးဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာပြီး မှန်ကန်ပါမှ ယုံပါတဲ့၊ ဘယ်သူကတော့ တို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခံရမှ၊ ကိုယ့်မကောင်းတာဖြစ်နေတာကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခါကျမှ သူ့ဟာ ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာ မှန်ပါလားလို့ ယုံပါလို့ပြောတာ)
ဘယ်ဘာသာဝင်ရယ်လို့ သီးသန့်ခွဲခြားထားတာ မရှိဘူး။ သိချင်သမျှကို ဦးဇင်းအသိဉာဏ်ရှိသမျှ ဖြေပေးခဲ့ ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အမှန်တရားကို သိဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်း ဦးဇင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓကို အတုယူအားကျမိလို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ သူ့တစ်ယောက် တည်းတွက်ဆို ချမ်းသာသုခကို ရနေပါလျက် ဘ၀ပေါင်းလေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလပတ်လုံး သူများမလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကိုပြုလုပ်ပြီး ပါရမီဖြည့်ကာ အသိဉာဏ်ပညာများရအောင် အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုအားထုတ်ပြီးလို့ ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘ၀ကိုရတဲ့အခါမှာလည်း မနားမနေ တစ်ရက်ကို(၂၄)နာရီရှိတဲ့အထဲက (၂)နာရီကျော်လေးသာ အနားယူပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေကို အများအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးဇင်းလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓလောက်မစွမ်းနိုင်ပေမဲ့ စွမ်းနိုင်သလောက်တော့ ဖြစ်နိုင်သမျှ အများအကျိုးရှိအောင်၊ အများ အမှန်တရားကိုသိရှိအောင်ဆိုပြီး ခုလို အမေးအဖြေများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။
အရင်ကတော့ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်သေးလို့ အင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့ဟာတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်မဖြေပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ခု နောက်ပိုင်းတော့ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်း အားထုတ်မှုများလာတဲ့ အတွက် အင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့အရာများကို အင်္ဂလိပ်လို ကိုယ်တက်ကျွမ်းသလောက် ဖြေဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇင်းအနေနဲ့ကတော့ ဘယ်ဘာသာကိုမှ အဆိုးမမြင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိမိတို့သိထားရမှာက ဘာသာဆိုတာထက် မိမိကိုယ်ကို စိတ်ထားကောင်းဖို့နဲ့ အမှန်တရားကိုသိမြင်ပြီး အဲဒီအမှန်တရားကို လက်ကိုင်ထားကျင့်သုံးဖို့ပါပဲ။ တချို့ဘာသာဝင်တွေမှာ စိတ်ထားကောင်းသူတွေ အများကြီးရှိသလို စိတ်ထားမကောင်းသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ ဦးဇင်းတို့ဘာသာမှာလည်း ကောင်းသူရော မကောင်းသူရော အများကြီးပါ။ အဲဒီတော့ အဓိကအကျဆုံးအရာက ဘာသာဆိုတာထက် အမှန်တရားကိုသိဖို့နဲ့ အဲဒီအမှန်တရားကိုလက်ကိုင်ကျင့်သုံးပြီး စိတ်ထားကောင်းလေး နဲ့ ပြုလုပ်နေထိုင်သွားကြဖို့ပါပဲ။ ဒါဟာ အဓိကအကျဆုံးပါပဲ။
ဦးဇင်းလည်း VOA သတင်းဌာနက အင်တာဗျုးလွင့်ပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားလူမျိုးတွေကပါ အင်္ဂလိပ်လို မေးခွန်းတွေ မေးလ်ထဲ ရောက်ရောက်လာပါတယ်။ မိမိက မြန်မာပြည်ပြန်ခွင့်တောင်းထားလို့ ကျမ်းစစ်ဆရာက ကျမ်းအတွက်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေကို နေ့စဉ်တွေ့ဆုံးပြီး စဉ်းစားမိတိုင်း ပြော ဆိုနိုင်အောင်ဆိုပြီး နေ့စဉ်တက္ကသိုလ်ကို ခေါ်နေလို့ သွားနေရပါတယ်။ အဲဒီလို အလုပ်များနေပေမဲ့ ဘာသာခြားများရဲ့ ဘာသာရေးဆွေးနွေးမေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြာပေးမှု၊ ဂျာနယ်မှာ ဆောင်းပါးရေးပေးမှု၊ မိမိတို့ဘာသာဝင်များ သိချင်တာများကို ဖြေကြားပေးမှု၊ တိုင်းတစ်ပါးသားများရဲ့ အင်္ဂလိပ်မေးခွန်းများကို တက်နိုင်သမျှ ဖြေကြားပေးမှုတို့ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇင်းမြန်မာပြည်ပြန်ရင် တည်းမဲ့လိပ်စာနဲ့ ဆက်သွယ်ရမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို အွန်လိုင်းမသုံးဖြစ်ရင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရအောင်ဆိုပြီး ဘာသာခြားများကပါ မေးမေးနေကြတာနဲ့ ဦးဇင်းကို ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဦးဇင်း မြန်မာပြည်ရောက်ရင် ဖုန်းသုံးရအောင်ဆိုပြီ့း မွေးစားအမ တစ်ယောက်ကနေ ဦးဇင်းအတွက် တစ်ခါသုံးကဒ် ၀ယ်ပေးထားပါတယ်တဲ့။ အဲဒီနံပါတ်က 09-43910411 ပါတဲ့။ အဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်လျှင် ဦးဇင်းနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ရပြီးမို့ သိချင်တာ မေးချင်သူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံး သူတော်ကောင်းစိတ်လေးတွေရှိပြီး သူတော်ကောင်းအလုပ်လေးများလုပ်ကာ သူတော်ကောင်းများစုဝေးရာအရပ်ကို လျင်မြန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သ လျက်……။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်မှသိမဲ့လူများအတွက် ဦးဇင်းလိုရင်းကိုပဲ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
The Other religious people asked to me frequently that how do you think about our religion? Then, I answered that if you do good or evil deeds, you will have result of them. It is the main of my perception. I told them. I’d like to explain about various view of religion but I have not enough time and knowledge.
I am going to describe useful attitude for all religion. When you know for yourselves that certain things are wrong, unwholesome, bad, then give them up; when you know for yourselves that certain things are right, wholesome, good, then accept them, follow them."
1. Do not believe something just because it has been passed along and retold for many generations.
2. Do not believe something merely because it has becomeatraditional practice.
3. Do not believe something simply because it is well-known everywhere.
4. Do not believe something just because it is cited inatext.
5. Do not believe something solely on the grounds of logical reasoning.
6. Do not believe something merely because it accords with your philosophy.
7. Do not believe something because it appeals to "common sense."
8. Do not believe something just because you like the idea.
9. Do not believe something because the speaker seems trustworthy.
10. Do not believe something thinking, “This is what our teacher says.”
When you yourselves know, “This is unwholesome, this is blameworthy, this is censured by the wise, these things when accepted and practiced lead to harm and suffering, and then you should give them up.”
It is wise to makeaproper examination before accepting any religious teaching. It should not be taken to mean that one should reject all religious teachings and beacynical materialist, as some try to imply. That would mean holding fast to one’s own opinions and failing to investigate any further.
Moreover, we will contemplative these four kinds of imformations.
1. "'Suppose there isahereafter and there isafruit, result, of deeds done well or ill. Then it is possible that at the dissolution of the body after death, I shall arise in the heavenly world, which is possessed of the state of bliss.' This is the first solace found by him.
2. "'Suppose there is no hereafter and there is no fruit, no result, of deeds done well or ill. Yet in this world, here and now, free from hatred, free from malice, safe and sound, and happy, I keep myself.' This is the second solace found by him.
3. "'Suppose evil (results) befall an evil-doer. I, however, think of doing evil to no one. Then, how can ill (results) affect me who do no evil deed?' This is the third solace found by him.
4. "'Suppose evil (results) do not befall an evil-doer. Then I see myself purified in any case.' This is the fourth solace found by him.
It concludes by saying howanoble disciple abides free from covetousness, ill-will, and confusion, withamind made expansive with loving-kindness, compassion, sympathetic-joy, and equanimity. Thus he enjoys bliss here and now and is assured of going to heaven after death if there isaheaven. Both way he is self assured and content.
When we practise and observe those imformations we will get good result and good knowledge. Besides, if we practise in our life we are going to peaceful and good place soon. I wish all people will do good deeds and good result.
ပို့စ်လေးကို သေချာဖတ်ပြီး မှတ်သားသွားပါတယ် ဘုရား...